Madaxweyne Farmaajo oo u safray dalka Turkiga - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweyne Farmaajo oo u safray dalka Turkiga
April 25, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweyne Farmaajo oo u safray dalka Turkiga. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u safray dalka Turkiga maanta oo Talaado ah.
Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa marti-qaad ka helay dhiggiisa dalka Turkiga Reccep Tayip Erdogan.
Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo warbaahinta garoonka diyaaradaha Muqdisho kula hadlay, ayaa sheegay in madaxda labada dal ay ka wadahadli doonaan xiriirka iyo iskaashiga u dhaxeeya labada dal.
Madaxweynaha ayaa safarka waxaa ku weheliya masuuliyiin katirsan golaha wasiiradda iyo baarlamaanka.
Turkiga ayaa Soomaaliya siinayay caawimaad shanti sanno ee u dambaysay, iyadoo labada dal ay wada-galeen heshiis iskaashi oo dhaqaale iyo mid milatariba ah.
January 2, 2017 Soomaaliya iyo Sucuudi Caraabiya oo soo afjaray heshiiska shaqaalaysiinta muwaadiniita Soomaaliyeed ee ka shaqayn doona gudaha boqortooyada Sucuudiga